၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ပြင်စရာသိပ်မရှိလို့ ဦးဌေးဦးပြော နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေး ပြုစုထားတဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်တဲ့အတွက်၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ အချက်အလက်တွေထဲမှာ လောလောဆယ် ပြင်ဆင်စရာ သိပ်မပါဝင်ကြောင်း အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဒီကနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က ကျင်းပသော ပထမဆုံးအကြိမ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး ရှင်းလင်းပြောကြားနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးဌေးဦးသည် စစ်အစိုးရ၏ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်သည်။ (Photo: AFP)
လာမယ့် ဧပြီ ၁ရက်မှာ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလားအလာတွေကို အာအက်ဖ်အေက သီးသန့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းစဉ်မှာ ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးက ခုလိုပြောတာပါ။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက လစ်လပ်နေတဲ့ အမတ် ၄၈ နေရာမှာ ၀င်ပြိုင်ဖို့ မနေ့က စာရင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဒေသတွင်း မဲဆွယ်ရာမှာ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအပြင် လမ်းပြင်ပေးမယ် တံတား ဆောက်ပေးမယ် စတဲ့ မက်လုံး တွေပေးပြီး မဲဆွယ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရနဲ့ ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကွဲကွဲပြားပြား ရှိပါသလားလို့ အာအက်ဖ်အေက မေးမြန်းရာမှာ ဦးဌေးဦးက“အစိုးရ မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရ မပါပါဘူး။ တချို့ကိစ္စတွေကျတော့ ဥပမာအားဖြင့် လမ်းမီးတွေ ဘာတွေဆွဲတာ လိုင်းတွေ ဘာတွေ ပြင်ကြတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ တိုက်တွန်းပေးတာပေါ့။
အစိုးရသိအောင် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကျတော့ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သူတို့ ဆောင်ရွက်တဲ့ အချိန်ကျတော့ ဒီအချက်ကလေးတွေ သိတယ်ဆိုရင် သူတို့လည်း စဉ်းစားပြီး လုပ်ပေးတာတွေ ရှိတာပေါ့”။
ဦးဌေးဦးက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ရွေးချယ်ရာမှာ လူထု သဘောကျမယ့်သူတွေကို ရွေးချယ်ထားပြီး ပြည်သူနဲ့ ဒေသအပေါ် စေတနာကောင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်သူတွေကို အဓိကထားကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ပါတီတိုင်းကို မိတ်ဖက်ပါတီအဖြစ် သဘောထားကြောင်း ဦးဌေးဦးပြော
တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်ကို မိတ္ထီလာမှာ တိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့
Feb 06, 2012 09:02 AM
တော်တော်စိတ်ကုန်ဖို့ကောင်းတဲ့လူလို့ဘဲမြင်ပါတယ် သူတို့ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှကိုနားထောင်ချင်စိတ်မရှိလောက်အောင် စိတ်ကုန်စရာပါ
Feb 03, 2012 08:58 AM
ဒီဘဲနာကြီးက ဘယ်သူကြီးလဲ ဥပဓိ ရုပ်က ချာလိုက်တာ Feb 03, 2012 03:39 AM
I wonder what you talk and your level in military are not appropriate. Please hesitate the general status. Feb 03, 2012 12:49 AM
Feb 02, 2012 09:04 PM